Aha! Jokes, Satire » နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ (April’ 2015)	76
ဆံပင် ပုံစံ ကို ပြောတာနော်…၊ ဟိုလျှောက်တွေး ဒီလျှောက်တွေး တွေ တွေးကြပါနဲ့…ဟေး..ဟေး..။
ဆရာမ ၀င်းဝင်းလတ် ရဲ့ အချစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာ ၀တ္ထုကို စကိုင်းနက် ရုပ်သံအတွက် ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ဖန်တီး သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်…။
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းကို အစွဲကြီး စွဲကြပါ့မလား ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူလျက်ရှိနေပါတယ် ကိုဝိုင်းရေ…။
ဇော်ဝင်းထွဋ် က မြို့ပြကို ငြီးငွေ့လာသလို မြို့ပြကရော ဇော်ဝင်းထွဋ်ကို ငြီးငွေ့ လာတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဗျာ…။
သမီးကို ဥပဒေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ပေးတွေ့ပါတယ်…။ တခြား အချိန်တွေမှာတော့ ပေးမတွေ့လိုပါဘူး
ထိုင်းဈေးကွက်မှာ ပြေတီဦး တစ်ယောက် ရောင်းတန်းဝင်နေပြီလား ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်မျိုးကြီးလည်း
အောင် မိုးသူ says: တော်တော်စုံစုံလင်လင်သိသွားတယ်။ ခွန်းဆင့်နေခြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကိုဘိုကြည်ကတော့ ပညာကိုစော်ကားခံသလိုဖြစ်တာကိုး။ ကိုဘိုကြည်ဆိုတာလည်း နည်းနည်းနောနော လူမှမဟုတ်ဘဲ ငွေလောက်တော့ အရေးပါမလား ပြန်ပေးမှာပေါ့ သူ့ပိုက်ဆံတွေ။ ကျတော့်ရဲ့ ဆရာဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အောင် မိုးသူ says: ကိုဘိုကြည်က ရန်ကုန်က ဂရတ်ဖစ်လောကမှာ နာမည်ကြီးပါပဲ။ သူပြောတာနည်းလမ်းကျတာပေါ့။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: သတင်းအစုံကို စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောပြနေသလိုမျိုး
အလှဆီလိမ်းချင်နေမိဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် ;
Mike says: .ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်း ရဲ့ လက်ရှိဆံပင်ပုံစံက ကတုံးကေဆိုလို့
.အပြေးလေးထွက်ခွာသွားောကာင်းသိရတယ်ဗျာ..ဟီဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ခင်ဇော် says: ဝိုင်း တော့ မကြည့်ချင်တော့ဘူးးး
အောင် မိုးသူ says: ဒါရိုက်တာထဲမှာတော့ ညိုမင်းလွင်ကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့။ ဟိဟိကိုယ်က ဘာမှမဟုတ်တော့ အကုန်လုံးကို စောင့်ကြည့်နေတာ။ အားပေးတာပြောပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဆေးမှုနဲ့ထောင်ကျသွားသေးလို့ အာ့ကြောင့် စောင့်ကြည့်နေတုန်းသာ… ဟိဟိ။
ဂျက်စပဲရိုး says: အနုပညာသည်တွေ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လုပ်တာလောက် တောက်ညင်ကပ်တာ မရှိဘူး။း)
ပြေတီဦးကို ထိုင်းကနေ အက်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ဆီမှာ ချက်ချင်း အဖြေပြန်မပေးတာ အက်ရှင်ကား ဆိုတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နှုတ်ခမ်းမွှေး အတုလေး တပ်ပြီး ရိုက်ရမှာ စိုးလို့များလား :P
Ma Ma says: ဟိုးခေတ်တုန်းကတော့ ၀င်းဦးက ရုပ်ရှင်မင်းသားအဆိုတော် စာရေးဆရာ (ဒါရိုက်တာတောင်လုပ်ခဲ့သေးလားမသိဘူး) ဆိုပြီး ချီးကျူးအားကျစရာ စွယ်စုံတော်ခဲ့တာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ဟီး သူတို့ခေတ်တုန်းကတော့ တော်ကြပါတယ် တော်တော်ကြီးကို တော်ကြတာပါ။
အောင် မိုးသူ says: ဘော်လီဆော့ဆာဆိုလား ဘော့ဘီဆော့တာဆိုလား သူက ဗွီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုတော့။ အားမပေးဘူး အားမပေးဘူး ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မရသောသူ။ Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဂျက်စပဲရိုး says: ပြည်သူချစ်သော အနုပညာ ရှင် ဆိုတာ ဒါမျိုး ထင်ပ။
Wow says: အချစ်နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာမှာ မင်းသမီးက စိုးမြတ်သူဇာအစား သန္တာလှိုင်၊ လိုင်လာခန်း တို့ဆိုရင် မဆိုးဘူး.. ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ သရုပ်ဆောင်တာတွေနဲ့ ဆိုရင် ဆရာမ ၀တ္တုကို နှမြောလို့
အောင် မိုးသူ says: အမှန်ပဲ။ သန္တာလှိုင်တော့ မသိပေမယ့်။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ လိုင်လာခန်းသရုပ်ဆောင်ချက်က အပိုအလိုမရှိ တော်တော်မိုက်တယ်။ သူနဲ့အတူ မိုးဟေကို ကိုလည်း အဲသည်ကားနဲ့ ကိုယ့်ဖာသာ အကယ်ဒမီပေးလိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ပြည်တီဥ မျောက်ရည်ဒွေ ဘူးသီးလုံးလောက်ကျနေဒါကိုကော အကယ်ဒမီ မပေးချင်ဘူးလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: သူလည်းမဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်း အိုဗာတင်းဖြစ်နေသလားလို့ ထင်မိတာပါ။ ဟီးးးးးးးးးးးးး
Ma Ma says: နည်းနည်း အိုဗာတင်းမဟုတ်ဘူး။
များများ အိုဗာတင်း နေတာမို့ မကြိုက်ဘူး။ Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Alinn Z says: မိုးဟေကို ကိုတော့ ကျုပ်တို့ စိန်ကျောက် ရတနာဆိုင်ကို လာကတည်းက ကျုပ်လေးကို ကြည့်သွားတဲ့ မျက်လုံးတဝင့် အကြည့်တချက်နဲ့တင်
ဂျုးအန်တီတို့ ဆရာ အော်ပီကျယ်တို့အစပေါ့. . သူတို့က မန်ဘာမဝင်ပေမဲ့ အပြင်ကတော့ အားရင် ဝင်ကြည့်နေမှာ သေချာသဗျ
Crystalline says: ဆရာမဝတ်​ထုကို အရမ်းစွဲခဲ့တာ.. အပိုင်​ဝယ်​သည်​အထိ… ဇာတ်​​ကောင်​အသက်​အရွယ်​ပုံစံအရ​တော့.. ​ပြေတီဦး/နိုင်​နိုင်း.. စိုးမြတ်​သူဇာ…. ရန်​​အောင်​…ဟိုကပြား​ဒေါက်​တာမမဆတ်​စလူး​နေရာ.. နန်းဆုရတီစိုးထည့်​.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: ​ပြောဖို့ကျန်​ခဲ့လို့… သများက​တော့ ရုပ်​ရှင်​ဆို မကြိုက်​သူမို့မကြည့်​ဘူးလို့….
​နောက်​ ရဲသွင်​ကိုလည်း ကြိုက်​ခဲ့ဘူးပါတယ်​လို့.. Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Chrstalline ;
Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာကို ဝတ္ထု စာအုပ်အတိုင်းပဲ ရှိစေချင်တယ် မူရင်းအရသားကိုမဖျက်စီးကြပါနဲ့ မြန်မာ ဒါရိုက်တာ
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဝတ္တု မဖတ်ဖူးသေးဘူး။ တော်တော်ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။
Alinn Z says: အယ် . . . !!!! . . .
black chaw says: @ Alinn Z ;
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒဒင်းတွေ စုံဘာ့ ကျောင်းဒဂါဂျီးရေ …
black chaw says: @ မဟာရာဇာ အံစာတုံး ;
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘီစီနဲ့ ကြိုပီးယင်
Fall Guy says: ​ပြေတီဦး သရဲကားက ဒရက်​ကူလာကားဗျ
black chaw says: @ Fall Guy ;
Mr. MarGa says: ရင်အေးစရာ မျက်စိအေးစရာသတင်းလည်း တစ်ခုမှ မပါဘူး
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်က မြန်မာအဆိုတော် မင်းသား မင်းသမီးတွေနဲ့
ဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားရပါလိမ့်နော် ၊ တရားခံထဲ ကိုဘလက်များ ပါလေမလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
မြစပဲရိုး says: အသဲစွဲကြိုက်ပြီး ဝယ်သိမ်းခဲ့ဖူး တဲ့ ဇာတ်လမ်း လေး အသက်ဝင်လာမှာကိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။
nozomi says: မဂဇင်း အခန်းဆက်ပါကတဲက ကြိုက်
ဟာ ဟ။ မင်းသမီး ဖြစ်လို့ ရပြီ ဆိုတော့ မင်းသား တွေ ကို တော် ကောက် မယ်ရှင့်။ “သက်နိုင်ဇော်” နေရာမှာ “ကိုနိုဇိုမိ” ကို ခေါ်မယ်။
manawphyulay says: ဟုတ်ပါပြီ ဦးဦးဘလက်ရယ်… ဒီထက် ပိုသိချင်တာတွေကော တင်ပေးပါဦး။
naywoon ni says: ကျ​နော့ အမြင်​​တော့ အနုပညာရှင်​​တော်​​တော်​များများ( ရုင်​ရှင်​ ဗွီဒီယို အဆို​တော်​ ) သူတို့ အနုပညာကိုပြထာထက်​ ပိုက်​ဆံပဲ ရှာ​နေကြသလားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
Shwe Ei says: -ငှက်ကထရီး အူးလူမင်း..ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယို မရိုက်တော့ရင်/သရုပ်မဆောင်တော့ရင်..
..မြန်မာ ကားပြန်ကြည့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် :P
မွသဲ ( 17082011 ) says: အောင်ရဲလင်းကြိုက်ပု။ ပြီတီအူးကသရဲကားရိုက်ပါတယ်ဆိုပီး ငိုငိုနေရင်ကြည့်ကောင်းပါ့မလာ ခွန်းဆင့်နေခြည်ကဘယ်လိုကျိကျိရုပ်ကြမ်းကြီးလိုပဲ။ ဝိုင်းကိုတော့ ဖရူဖရူ ကရော်တိန်းနဲ့ပေးဇားချင်ဒယ်။ လေကြီးလို့။ အိုက်စာရေးဆရာမရေးဒါတခါမှမဖတ်ဖူးဘူး ဝယ်ဖတ်အူးမှ ကောင်းလား
kai says: မြန်မာ့ဂဇက်ပင်တိုင်ဓာတ်ပုံဆရာ.. ကိုကျော်စွာတယောက်.. မြန်မာပြည်ကကော်ဖီမစ်လား.. ဘာလား..အထုတ်ကလေးတွေဟာကို.. အဖြူမလေး၂ယောက်နဲ့.. ကြော်ငြာရိုက်လိုက်တာ.. မြန်မာပြည်မှာပြနေတယ်လို့..ပြောလေရဲ့..
ယူအက်စ်ရောက်နေတဲ့.. စနှိုးဝှိုက်ကိုမောင်မောင်ဦးက.. ဂျွန်လွင်တယောက်.. ယူအက်စ်မကြာခင်လာမယ်လို့.. ပြောသွားတယ်..။ =
နားစွန်ကနေ…နားထဲရောက်တဲ့.. နားစွန်နားတွင်းသတင်းများပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
kai says: အောက်တိုဘာ ၁၇ရက်နေ့မှာ.. အာအိုင်တီရီယူနီယန်.. အယ်လ်အေမှာလုပ်မယ်..။
Ma Ma says: ခိုင်ဇာနဲ့ ရောဂါတူနေပြီ။
အာအိုင်တီဆင်း အမတစ်ယောက်ကို အဖော်ညှိပြီး ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ်။ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ခု ရောဂါ ပိုဆိုးလာနေပြီ။
kai says: ဗီဇာဖေါင်ကို ဒေါင်းကြည့်လိုက်..။
အဲ.. လည်လည်သွားဖို့အချိန်လေးများလည်း.. ပိုယူထားကြစေချင်ကြောင်း…။ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဗီဇာ ဖောင် မှာက From Myanmar ဖြစ်နေတယ်။
kai says: သီဟပူရက..ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်..။ ဆရာဦးကျော်စိန်ကို.. မေးပြီး ဗီဇာပေါင်းတင်လိုက်…။
Ma Ma says: အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲက အင်ဂျင်နီယာအောင်လက်မှတ်ကို ဘယ်နားပြန်ရှာရမှန်းမသိတာပဲ။
ဘီဒိုဟောင်းတွေ ပြန်ဖွအုံးမှ Was this answer helpful?LikeDislike 8413
နားရင်းနားတွင်း ယူအက်စ်သတင်းဆိုပြီး နားစွန်နားဖျားနဲ့ အပြိုင်ကြဲလိုက်ပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အချစ်​၏​နောက်​ဆက်​တွဲစာမျက်​နှာကို
ဗျို့သူကြီး စိုင်းစိုင်းနဲ့​တွေ့ရင်​ ပုံ​ကောင်း​ကောင်းရိုက်​ပြီး အ​နော့်​တွက်​ လတ်​မှတ်​​တောင်း​ပေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
uncle gyi says: ပြေတီဦးကိုတော့မြန်မာဈေးကွက်ကိုမျှော်ပြီး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မြန်မာကား တစ်ခါမှ မကြည်ဖူးလို့ ဘာမှမပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းသားချည်းပဲ ရိုက်တဲ့ကားများ ရှိမလားမသိဘူး။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကြည့်ချင်တယ်။ မင်းသမီးပါရင် ကြည့်လို့ကို မရဘူး။ မင်းသားတွေကတော့ ကိုယ်ကအားလုံးကို ကြိုက်တာဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်လေ။
​ဒေါ် လေး says: အချစ်​ရဲ​နောက်​ဆက်​တွဲ က​တော့ အခန်းဆက်​မှာကတည်းက
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဒီလူကြီး ဒုတိယံပိ ဟားနီးမူးနေတုန်း ၀င် ရိ အုံးမှပါ
အတွေးလေး says: အတော် ကိုစုံစုံလင်လင်သိ သွားရတာပဲ၊ခုလို ပြောပြပေးတာ ကျေးကျေး ပါလို့စ်